Khabiir Saadaaliyey Kulamada Champions League Ee Atletico Madrid Vs Manchester United & Chelsea Vs Lille - Kuwee Ku Hadhaya Wareegga 16ka? - Laacib
HomeWararka Champions LeagueKhabiir Saadaaliyey Kulamada Champions League Ee Atletico Madrid vs Manchester United & Chelsea vs Lille – Kuwee Ku Hadhaya Wareegga 16ka?
Khabiir Saadaaliyey Kulamada Champions League Ee Atletico Madrid vs Manchester United & Chelsea vs Lille – Kuwee Ku Hadhaya Wareegga 16ka?
Manchester United iyo Chelsea oo horyaalka Premier League ah waxay wareegga 16ka Champions League la kala ciyaari doonaan Atletico Madrid iyo Lille, kuwaas oo ay labana ka hadhi doonaan tartanka, labada kalena ay u gudbi doonaan wareegga xiga ee siddeedda.
Ralf Rangnick ayay kooxdiisu imtixaanka adag mari doontaa marka la barbar-dhigo Chelsea, inkasta oo ay iyaduba la kulmayso Lille oo kusoo guuleysatay horyaalka Ligue 1, isla markaana bandhig wanaagsan ka samaynaysa garoomada.
Kooxda difaacanaysa Champions League ee Chelsea ayaa uu isku aadku u yimid iyadoo kaalinta saddexaad kaga jirta horyaalka, isla markaana dagaal adag kula jirta kooxaha Manchester City iyo Liverpool oo laba dhibcood oo kali ahi ay kala soocaan. Sidoo kale, Lille ayaa isku aadkan ka heshay kooxda ay la ciyaarayso iyadoo horyaalka ay xilli ciyaareedkii hore ku guuleysatay kaga jirta kaalinta 11aad.
Red Devils ayaa iyaduna waxay xilli ciyaareedkii hore waxay wareegga koowaad ee group-yada kaga hadhay Champions League, halka Atletico Madrid oo ay kulmayaan ay xilli ciyaareedkii hore ku hadhay wareeggii siddeedda oo ay Chelsea ku reebtay.
United waxay isku-aadkan tagtay iyadoo kaalinta shanaad kaga jirta horyaalka Premier League, isla markaana 11 dhibcood ka dambaysa Manchester City oo hoggaanka horyaalka haysay. Atletico waxay iyadana kooxdeedu ku dhacday United oo ay isku-aadka timid iyadoo kaalinta afraad kaga jirta horyaalka Laliga, balse 13 dhibcood ka dambaysa Real Madrid oo hoggaanka haysa.
Khabiirka kubadda cagta Chris Sutton ayaa saadaaliyey kulamada kulamada afartan kooxood ee wareegga 16ka Champions League, waxaana uu xusay in Chelsea ay si durduro ah ku gaadhi doonto wareegga siddeedda oo ay soo garaaci doonto Lille, waxaanu yidhi: “Waxay ila tahay, in Chelsea ay garaaci lahayd Real Madrid haddii ay ku dhacdo, Lille na way uga sii fududahay.”
Intaas kaddib waxa uu ka hadlay, saadaalna ka bixiyey kulanka Atletico Madrid iyo Manchester United, waxa uu yidhi: “Waxay markii hore ku dhaceen Lionel Messi, Neymar iyo Kylian Mbappe, haddana waxay waajahayaan Antoine Griezmann iyo Luis Suarez.
“Ralf Rangnick waxa uu sida ugu fiican uga shaqaynayaa inuu adkeeyo khadka dambe. Rangnick wuxuu isku dayayaa inuu falsafaddiisa ka hirgeliyo United. Si fiican ayuu kula bilowday marka aad eegto natiijooyinka inkasta oo aanay ciyaar ahaan isbeddel badan samaynin.
“Yaa garanaya sida ay United ahaan doonto illaa February? Dhaawacyo ayaa dhibaato ku noqon kara, laakiin waxa aan rajaynayaa in ay horumar badan samayn doonto Manchester United marka ay waajahayso Atletico oo difaaceedu wanaagsan yahay. Anigu waxay ila tahay in Manchester United ay soo bixi doonto.”